स्थापना दिवसमा निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण::Online News Portal from State No. 4
स्थापना दिवसमा निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण
बागलुङ, १७ चैत – नेपाल पत्रकार महासंघको ६४ औं स्थापना दिवशको अवसरमा विबिध कार्यक्रम गरेर मनाईएको छ । दिवशको अवसरमा शनिवार बिहान प्रभातफेरीको आयोजना गरियो । बागलुङकै सयपत्री एफएमको पनि १२ औं स्थापना दिवश भएकोले अस्पतालका बिरामीलाई फलफूल बितरण लगायतको कार्यक्रम पनि गरिएको थियो । प्रभातफेरी पछि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा अस्पताल बिकास समिितका अध्यक्ष केवी राना मगरले पत्रकारहरुले स्वाथ्य परीक्षण गराउँदा आम जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने बताए ।
उनले अस्पतालको व्यवस्थापकीय र उपचारको सेवामा सुधार ल्याउन निरन्तर काम गरेको पनि बताए । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले केही समय देखि विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा थालेको छ । हालै आएका ६ जना विशेषज्ञ डाक्टरले सेवा दिन थालेपछि जटिल समस्या भएका बिरामीले पनि यही उपचार पाएका छन् । दिवशको अवसरमा झण्डै ४० पत्रकारले स्वास्थ्य परीक्षण सहितको सेवा लिएको अध्यक्ष दिल शिरिषले बताए । एकसाता देखि अस्पतालमा पहिलो पटक ६ जना बिशेषज्ञ सहितका डाक्टरले सेवा दिन थालेका छन् । तत्काल बस्ने स्थान नभएर डाक्टरहरु होटलमा बस्दै आएका छन् । यो कार्यक्रमले पत्रकार र अस्पतालका चिकित्सक बीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर भएको शिरिषले बताए । पत्रकारहरुकै पटक पटकको लेखाइको प्रभाव स्वरुप अस्पतालमा डाक्टरहरु आएको भन्दै आएका डाक्टर र पत्रकारको अन्तरक्रियाले अझै समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
अस्पतालमा निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र बिश्वकर्मा पोखरेल सहित स्त्रिरोग बिशेषज्ञ डा. सौगात कोइराला, अर्थोपेडिक विशेषज्ञमा डा. नविन पौडेल र निरन्जन अर्याल, फिजिसियनमा डा. प्रदिप श्रेष्ठ, रेडियोलोजिष्ट डा. अजय पोखरेल, नाककान घा“टी विशेषज्ञमा डा. पोखरेल सहित १५ जना मेडिअल अधिकृतहरु समेत कार्यरत छन् । अस्पतालमा एनेस्थियोलोजिष्टको मात्र अभाव भएकोले खोजी भैरहेको अध्यक्ष केवी रानामगरले बताए । स्वास्थ्य परीक्षण स“गै पत्रकारहरुको रगत परीक्षण, मधुमेय, रक्तश्रव, मृगौला लगायतको परीक्षण सेवा पनि दिइएको थियो । एक्सरे, ईसिजी र भिडियो एक्सरेको सेवा पनि दिएपछि आवस्यक औषधि समेत अस्पताल बिकास समितिबाट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।